Maxay tahay tillaabada xigta ee Puntland u qorshaysan kaddib warkii ay shalay soo saartay XF? | Hadalsame Media
Home Wararka Maxay tahay tillaabada xigta ee Puntland u qorshaysan kaddib warkii ay shalay...
Maxay tahay tillaabada xigta ee Puntland u qorshaysan kaddib warkii ay shalay soo saartay XF?
(Muqdisho) 08 Maarso 2021 – Madaxda Maamulka Puntland ayaa si kulul uga jawaabey eed uga timid dhanka XF Somalia oo ku eedeeysay inay yihiin ”jid iyo jiho diid” hor taagan inay dalka doorasho ka dhacdo, taasoo ay Puntland ku tilmaantay ”tillaabo qiiq isku qaris ah.”
Wasiirka Warfaafinta Puntland, Cabdullaahi Cali Xirsi Timo-Cadde ayaa ku dooday in MW Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ahaa ninka soo jeediyay in la soo kala nasto sidaa darteed aanu jirin shir fashilmay oo ay iyagu ka war qabaan.
“Shir fashilmay ma jirin Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo ayaa codsaday in la soo kala nasto dibna la isugu soo noqdo kabacdina shir jaraa’id ayuu qabtay Wasiir Dubbe intaasaan ognahay innagu,” ayuu yiri Wasiir Timo-cadde oo BBC la hadlay.
Wasiir Timo-Cadde ayaa intaa raacshey in sababta uu Madaxweynuhu u dalbaday in la soo kala nasto ay tahay in la isku fahmi waayay ajandaha shirka looga hadli lahaa, isagoo sheegay inay doorasho ogol yihiin balse aanay aqbali doonin wax ka duwan doorasho saaxi ah, isagoo sheegtay in labada maamul ee iminka la eedeeyey ay yihiin kuwa doonaya inay ”dalka badbaadiyaan”, sida uu yiri.
“Cidda tanaasul sameysaa innaga weeye cidda rabta in Soomaaliya ay badbaadiso innaga weeye labada dowlad gobaleed weeye diyaar ayaana u nahay in meel walba oo la isugu yimaada la garnaqsado.” ayuu yiri Wasiirku.
Wasiiirka ayaa rajo ka muujiyay in dib la isugu soo noqon doono si xal looga gaaro is mari waaga ka taagan arrimaha doorashada isagoo ballan qaaday in ay sii joogayaan magaalada Muqdisho.
Previous article“Warbaahinta Qaranku waxay ku tillaabsatay arrin ceeb & cambaar ku ah!”
Next articleLabadii todobaad ee ay Kenya u qabatay in lagu xiro xeryaha qaxootiga oo dhamaaday (Maxaa haatan socda?)